I-Cook Islands Trust - I-Best Offshore ye-Asset Protection Vehicle
A I-Cook Islands Trust inikeza inamandla kakhulu ukuvikelwa kwamafa ase-offshore. Iziqhingi zaseCheka zihlala eNingizimu yeSifunda sase-Hawaii. Bakhombisa umlando omkhulu wokuvikelwa kwempahla yecala lomthetho emlandweni. Akuyona indaba yokuvikelwa kwemfundiso. Senze ucwaningo olunzulu kuzo zonke izigameko izinkantolo ziyivivinyo. Kuzo zonke izimo sifunda, ukwethenjwa okuqinisekisiwe kwanikeza ukuvikeleka kwezimpahla zamakhasimende. Okubaluleke kakhulu, kunamacala amabili lapho amandla amakhulu omthetho ocebile kakhulu emhlabeni - uhulumeni wase-US - nguye ozama ukungena ngemvume. Inothi elibalulekile: Asikwazi ngokusekela ukwethenjwa kwe-offshore ukuvikela izimpahla ezivela kuhulumeni wase-United States. Senza nje umbono.
I-Cook Islands Trust Ingivikela Kanjani?
Inkantolo yangakini ithi, "Sinike imali." Ngakho, ubeka ndawonye incwadi bese uyithumela kumphathiswa. Ubazisa ukuthi ijaji lendawo liniyala ukuthi ubuyise imali. I-trustee iyadingeka ukuba ilandele imiyalelo ehlinzekwe kwi-Cook Islands Trust, okuyinto idokhumenti ebhalwe ngayo. Ukuvikeleka kwezinto eziphathekayo kusho ukuthi umphathiswa uvinjelwe ukuvumela izimali zikhishwe ku-trust uma umzuzi esebenza ngaphansi kwamandla ezinkantolo. Ngakho, umphathiswa, ohlala ngaphandle kwenkantolo yendawo yakho, wenqaba ukuhambisana. Awunenkinga ngoba ulalela ngokuzithandela imiyalo yejaji futhi ucela umphathiswa ukuba abuyise imali. Usukho "ukungenakwenzeka ukwenza," isikhundla esiqinisekisayo sokuzivikela ngokomthetho.
Indlela Yokwakha i-Cook Islands Trust
Ngaphambi kokuthi "into embi" yenzeke, wena (obani ozuzayo ku-trust) ulawula ngokugcwele. Ngakho-ke, uphatha izindaba zezimali zansuku zonke. Indlela okufezwa ngayo yilapho sakha i-an inkampani ye-offshore limited (LLC). I-trust inomnikazi we-100% we-LLC. Ungumphathi we-LLC ye-offshore. Ngakho, ulawula izimpahla ze-LLC. Ungumshicileli kuwo wonke ama-akhawunti asebhange. Ngaphezu kwalokho, awudingi ukufaka i-akhawunti ku-Cook Islands, kepha ungakwenza kunoma yiliphi izwe emhlabeni onika indawo ephephile yezezimali.
Khona-ke, lapho "into embi" ikhula, umphathiswa angangena ukuze akuvikele. Okusho ukuthi inkampani ye-trustee, okuyinkampani yomthetho e-Cook Islands, ithatha indawo yakho njengomphathi we-LLC.
Kuthiwani ngokuphepha kwalolu thuluzi lokuvikela impahla ye-offshore? Izici ezimbili ezibalulekile zokuphepha yizo ukuthi umphathiswa we-Cook Islands uthembele yi-firm law firm. Ukuze uthole ilayisense umphathiswa kumele ukuba athole ukuhlolwa okuyisimangaliso. Isibopho sisho ukuthi izimali zakho ziqinisekisiwe kusuka esenzweni se-trustee. Ngaphezu kwalokho, sisebenzisa inkampani yokuthembela esiye saba nobuhlobo nayo iminyaka engaphezulu kwe-20.
Ukuphepha nokuphepha kwekhasimende, kunomphumela owodwa kuphela lapho umphathiswa angakwazi ukungena khona. Lokhu kungukuthi, bangangena kuphela lapho izinkantolo zithatha imali. Ngakho-ke, umbuzo obalulekile okumele uwenze ube kanje. Ingabe ungathanda ithuba le-100% lemali ethathwe izinkantolo? Noma ingabe ungathanda ukuba nekampani egcwele amalayisensi ehlanganisiwe, engabambanga imali kumakhasimende, yenza isenzo obakhokhele ukwenza. Lokho, ukugcina abaphikisi bakho bangathathi imali yakho?
Lapho "into embi" iphela, isikhundla sokulawula, ukuphathwa kwe-LLC, sibuyiselwe kuwe futhi ubuyele esihlalweni somshayeli nemali yakho yonke ephephile futhi evikelekile.
Phakathi naleso sikhathi, ngezikhathi zokwesatshiswa komthetho, uma unezinto ezidinga ukukhokhelwa, umphathiswa angakwazi ukukunakekela. Ungacela umphathiswa ukuba adlulisele ezinye zezimali zakho kumuntu omethembayo. Futhi, banganikela ngemali yezidingo zakho. Ngakho-ke, usazokwazi ukuthola imali yakho, kodwa izitha zakho ezingokomthetho azikho.
Umphumela wokuphela wukuthi imali oyisebenzisayo ngokuzikhandla kakhulu iphephile futhi ingekho ngendlela eyingozi.
Ukuvikelwa kwempahla enamandla kunayo yonke i-Cook Islands Trust ithola imali egcinwe ku-akhawunti yasebhange ephephile. Izinkantolo zase-US zinamandla phezu kwama-akhawunti e-US, ngakho-ke yibambe imali ngaphandle kokufinyelela kwabo. Ukwethemba kwakho kungabamba futhi iphothifoliyo yemakethe yamasheya, uma ufisa. Ungaba nesiphathimandla sokuphatha izimali zakho noma wena noma ungaqhuba ukuhweba kwe-intanethi okwenzayo. Gcina engqondweni, futhi, i-akhawunti yasebhange ayidingi ukuba i-Cook Islands. Ungayifaka noma yikuphi lapho engaqapheli amakhotho angaphandle angakwenqabela wena noma ukwethemba kwakho. Izibonelo yiSwitzerland, Luxembourg, Panama, Hong Kong neSingapore, isibonelo.
Izinkantolo lapho uhlala khona zinamandla okubamba izindawo zangempela zendawo. Ngakho-ke, kuhle ukubeka ingcebo ngaphakathi kwe-LLC ephethwe yi-trust. Ngaphandle kwalokho, ungarekhoda i-link ngokumelene nempahla lapho i-link ekhokhwa ku-LLC ngaphakathi kwe-trust. Uma kwenzeka into embi kwenzeka, kuyinto ekhethekile ukuthengisa impahla yangempela ongayinakathengisa ukuyidayisa kunokuba ilahlekelwe yimpahla ngokuqondile ekuthunjweni kwenkantolo.
Ubani Ongabeka Kukhona?
Sakha ama-Cook Islands amaningi amathemba abameli ngubani ozithengisa kabusha kumaklayenti abo. Siphinde sakha amathemba amaningi amaklayenti ethu ngokuqondile, abanesidingo sokuvikelwa kwempahla eqinile. Ukwengeza, singakwazi ukwengeza ukuhlelwa kokuhlelwa kwempahla ekuthembekeni kwakho. Uma ushona, isithakazelo sakho ku-trust singathunyelwa kubantwaneni bakho noma kwabanye okukhethayo.
Ingabe iyasula noma ingenakuguqulwa?
Kuyinto ehlukumezayo. Okusho ukuthi ukuguqulwa kungashintsha abazuzi ngokubambisana komphathiswa. Uma ukuxazululwa kungenza izinguquko ngokuqondile, ijaji lingase liphoqele ukusebenzisa ukulawula lokho. Uzophoqelela ukuhlala ukuze enze izitha zokuqeda abahlomula abasha. Kulowo mcimbi yedwa ophetheyo uzoba yijaji. Ngakho-ke, ngezinhloso zokuvikela izimpahla, umphathiswa ngumgudu wokuphepha wezinguquko ukuze kugcinwe ukuvikelwa kwempahla ye-trust.
Isitatimende Semikhawulo yokuThuthukiswa Okukhohlisayo
Isimiso sokulinganiselwa yisikhathi esinqunyiwe sokuletha isenzo somthetho. Ukuthutha okukhohlakeleyo, okubizwa nangokuthi ukudluliselwa ngamanga kuyimzamo yokugwema ukukhokha isikweletu ngokudlulisela izimpahla komunye umuntu noma inhlangano esemthethweni. Ngisho noma linamazwi "f", kuyisenzo somphakathi futhi akuyona isenzo sobugebengu. Ngakho isimiso sokulinganiselwa ekudluliseni ukukhwabanisa kubhekisela esikhathini esilandelayo lapho kudluliselwe izimpahla komunye okwehlisa ikhono lomunye umuntu ukuba enze izinyathelo zomthetho zokubamba impahla.
Ukuze uthole i-Cook Islands Trust, uma ufaka izimpahla ngaphakathi kwewashi amabili qalisa ukukhawula ngesikhathi esisodwa. Umkhawulo wesikhathi wokufaka amadokhumenti e-Cook Islands ngomzamo wokuthola izimpahla ezivela e-Cook Island unyaka owodwa kusukela ngesikhathi i-trust ithaswe ngemali noma iminyaka emibili ngenxa yesenzo senzo. Isizathu sesenzo sisho amaqiniso avumela umuntu ukuthi alethe isenzo ngokumelene nomunye. Ukwehla kwemoto kuyisibonelo esisodwa sesibangela sento. Enye ukuphulwa kwenkontileka, isibonelo.
Ngakho-ke, ake sithi uphawule ukuphela komunye emotweni yakho futhi ngokushesha usethe i-Cook Islands trust. Ngemva kwezinyanga eziyisithupha uthola icala. Icala lizothatha cishe ngonyaka. Uyakhala futhi lokho kungathatha ezinye izinyanga eziyisithupha. Ngesikhathi sesiphelile, umphikisi wakho akakwazanga ngisho nokuletha icala ku-Cook Islands uma efuna.
Ukuvikelwa Kwempahla Yase-Offshore Ngemva Kokugwetshwa Kwecala
Ngisho noma bashaya iwashi e-Cook Islands kunezinye izithiyo ezingenakunqotshwa. Okokuqala, kuzodingeka balwe nempi elwa kakhulu ngokwezomthetho olwandle. Okwesibili, kuzodingeka bakhombise ngaphezu kwesithunzi sokungabaza okucacile ukuthi ufaka imali ekuthembiseni lowo mthengisi. Akusikho umklomelo omdala, cabanga wena, kodwa lowo. Kunezizathu eziningi ongayinikeza ukusetha amathenda omhlaba wonke. I-diversification yefa yinye. Ukusebenzisa izitshalomali zamazwe ngamazwe ngezimiso ezimbalwa ezinzima kunenye.
Asikaze sibone noma yikuphi abahlali bethu noma abazuzi be-Cook Islands abathembele ukuthi sesisungulile ukulahlekelwa yikhulu. Lokhu kungakhathaliseki ukuthi isenzo somthetho senziwe ngaphambi noma emva kwesikhathi. Okuvame ukukwenzeka ukuthi ummangali ubona ukuthi izindleko zamacala angeke zingenakunqotshwa ukuthi ithemba lokulahlekelwa yilokho okuncane okungenakuphela kokuthola ukunqoba.
Ingabe isebenza? Sesiqalile amathemba ase Cook Cook kusukela maphakathi no-90. Ngaleso sikhathi, ezinamathemba ezinkulungwane eziningana ezidalwe, asikho irekhodi leklayenti elahlekelwa yimali eliye lafaka imali e-Cook Islands ekuthembekeni kwi-akhawunti yasebhange yomhlaba wonke. Umthetho wecala, lapho ithemba lithengiswe khona, libonisa ukuthi lisebenza. Kuze kube kunjalo, ummangali noma umklomelo wesigwebo uyahamba lapho bebona ukuthi ukuthembela endaweni.
Kube nezimo ezimbalwa lapho amaklayenti asicele khona nge-The Anderson Case lapho abantu abakhelwe khona i-trust bahlala khona ejele elifushane ukudelela inkantolo. Lesi sizathu sokuthi kungani: Ummeli owasetha i-trust ye-Andersons uyibeke ngokungalungile. Ummangalelwa wabhala i-trust ekwenzeni i-Andersons bobabili abazuzayo (obani abaphethe i-trust) kanye nabavikeli (abangakwazi ukufundisa umphathiswa). Lokhu kwakuyisinqumo esibi kakhulu engxenyeni yommeli wabo.
Ijaji lase-United States lithi ngenxa yokuthi u-Anderson wayeyizivikeli empeleni badala "ukungenakwenzeka ukwenza." Izindaba ezinhle kakhulu ukuthi, nakuba ukuthembana kwakungabhalwanga kahle, kusalokhu kuvikelwe impahla kaAnderson. Icala laphinde lathuthela e-Cook Islands lapho ijaji e-Cook Islands naseNew Zealand lisekela ukuvikelwa kwempahla yokuthembela. Imali ka-Anderson yayiphephile futhi iphephile. Lokhu kuwubufakazi obunamandla ngokuqondene nokuvikelwa kwempahla enamandla e-Cook Islands Trust. Ngisho nalapho ukwethenjwa kwezenzo kubhalwe ngokungalungile, ukuvikelwa kwempahla kugcinwe ngokuqinile.
Qaphela kakhulu umhlinzeki wensizakalo okhona lapho ophethe isakhiwo sakhe esithembayo kodwa ubeka phansi zonke ezinye izinketho, kuhlanganise nokwethemba esikuxoxayo. Une-setup yokwethenjwa yendawo yokwethemba futhi, ngaleyo ndlela, yehlisa phansi zonke ezinye izindlela. Uyayinaki iqiniso lokuthi kukhona umlando wezomthetho oqinisekisiwe obonisa ukuthi ukuthembela eziqhingini zaseCheka sekuzibonakalise ngokuqinile ngokuphindaphindiwe. Ubuthakathaka obukhona ezinkolelweni zendawo ukuthi kungaphansi kwekhala lejaji lendawo. Ngakho-ke, ngezikhwepha ezingavumelekile zokuvikelwa kwempahla eziboniswe e-Islands Islands, iningi lethu ensimini, elingenalo isisusa esiyimfihlo, siyavuma. Uhlobo lwethembana oluchazwe lapha lunikeza ukuvikelwa kwempahla enamandla kunazo zonke emhlabeni.
Kunezinye iziphathimandla ezinamathemba ezinxweme ezinjenge-Nevis, Anguilla, Barbados kanye nabanye. Ucwaningo olujulile lomlando wezomthetho ubonisa ukuthi i-Cook Islands ihlinzeka ngokuvikelwa okuphumelelayo kakhulu.